द्रुत सुरुवात - लीड / सम्पर्क प्रबंधन -
सुरू गर्नुहोस् - भिडियोहरू
डेमो र द्रुत सुरूवात
कार्य र अनुयायीहरू
रिपोर्ट र ड्यासबोर्डहरू
UTrons - सुरू गर्नुहोस्
लग - इन अहिले साइन अप गर्नुहोस्
लीड / सम्पर्क प्रबंधन
सबै कुराकानीहरू र सूचना 1 स्थानमा हेर्नुहोस्
इमेल सिङ्क गर्नुहोस्
बिक्रीकर्ताहरूको नेतृत्व र रेकर्डको दृश्यता नियन्त्रण गर्न असाइन गर्दै
स्तम्भहरू अनुकूलन गर्नुहोस् र फिल्टरहरू सुरक्षित गर्नुहोस्
सबै कुराकानीहरू र सूचना 1 स्थानमा हेर्नुहोस् 1 को 2
1 स्थानमा सबै विवरणहरू, टिप्पणीहरू, कार्यहरू, कुराकानीहरू, इमेलहरू, सम्बद्ध अभिलेख आदि हेर्न सम्पर्क नाममा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं यहाँ पछिल्लो गतिविधि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि एक थप गर्न सक्नुहुन्छ नोट / कुराकानी / कार्य वा सम्बन्धित कागजात अपलोड गर्नुहोस्।
तपाईं सम्पर्क जानकारी र सम्बन्धित रेकर्डहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ - सबै एकै ठाउँमा।
तपाईं आफ्नो इमेल सिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ ताकि कम्पनीको साथ सबै कुराकानीहरू कम्पनी हब CRM मा स्वचालित रूपमा सिंक हुने छन्। यदि तपाईं कम्पनी हब बाहिर बाहिर ईमेल पठाउनुहुन्छ / प्राप्त गर्नुहुन्छ।
अधिक जान्नुहोस्: कसरी इमेल सिङ्क गर्नुहोस्
बिक्रीकर्ताहरूको नेतृत्व र रेकर्डको दृश्यता नियन्त्रण गर्न असाइन गर्दै 1 को 3
बिक्रीकर्ताहरूलाई बिक्री गर्न: प्रत्येक रेकर्डमा एक फिल्ड 'को निर्धारण गरिएको' छ जसले कुन विक्रेतालाई सम्पर्क गर्दछ (वा कुनै अन्य रेकर्ड) नियुक्त गरिएको छ। पूर्वनिर्धारित रूपमा यो प्रयोगकर्तालाई जसले रेकर्ड / आयात आयात गर्न असाइन गरिएको छ।
यदि फिल्डले फारममा देखिने छैन र तपाइँ यसलाई देखाउन चाहानुहुन्छ, तपाई अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तल लुकेको सेक्शनबाट कुनै अन्य सेक्शनमा तान्नुहोस्।
बिक्रीकर्ताहरूको नेतृत्व र रेकर्डको दृश्यता नियन्त्रण गर्न असाइन गर्दै2को 3
यदि सम्पर्क / कम्पनीहरू / सम्झौताहरूको दृश्यता सार्वजनिकमा सेट गरिएको छ (डिफल्ट सार्वजनिक), सबै रेकर्डहरू सबैलाई हेर्न मिल्छ। तपाईले सेटिङलाई पदानुक्रममा आधारित परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस अवस्थामा, रेकर्डर विक्रेता, उनको प्रबन्धक, प्रबन्धकको प्रबन्धक र यति देख्न सकिनेछ।
अधिक जान्नुहोस्: डेटा पहुँच नियन्त्रण
बिक्रीकर्ताहरूको नेतृत्व र रेकर्डको दृश्यता नियन्त्रण गर्न असाइन गर्दै3को 3
पदानुक्रम पदानुक्रम प्रोफाइल प्रोफाइल द्वारा तय गरिएको छ। यो प्रोफाइलको 'रिपोर्ट' को प्रयोग गरी सेट गरिएको छ। पूर्वनिर्धारित रूपमा, प्रयोगकर्ताले सीईओ को प्रबन्धक र प्रबन्धक प्रतिवेदनलाई रिपोर्ट गर्दछ।
यदि तपाईं उत्पादन, देश, उद्योग आदिमा आधारित आफ्नो दृश्यता नियमहरू चाहनुहुन्छ भने, यो पनि सम्भव छ। सम्पर्कलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र तिनीहरू मद्दत गर्नेछन्।
विक्रेताहरूले सीआरएमहरूबाट घृणा गर्छन् किनकि तिनीहरू समय भोगिरहेका छन्। त्यसैले हामीले यसलाई सजिलो बनायौं कि ती सीआरएम छिटो अद्यावधिक गर्नका लागि तिनीहरू अझ बढि समय खर्च गर्न सक्दछन्!
अधिक जान्नुहोस्: छिटो थप्नुहोस् फील्ड अनुकूलन गर्नुहोस्
अनुकूलफिल्ड 1 को 2
तपाइँ अनुकूलन क्षेत्रहरूसँग आवश्यक सबै जानकारी ट्रयाक गर्न सक्नुहुन्छ। मनपर्यो उद्योग, नविकरण मिति, मुहान, आय, उत्पादन आदि
तपाईं विभिन्न प्रकारको क्षेत्रहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ पाठ, रकम, नम्बर, मिति, विकल्पहरू चयन गर्नुहोस्, कुल, सूत्र, अर्को रेकर्ड सम्बद्ध गर्नुहोस् आदि
अधिक जान्नुहोस्: फिल्ड अनुकूलन गर्नुहोस्
अनुकूलफिल्ड2को 2
यी फिल्डहरू प्रायः सबै ठाउँमा उपलब्ध हुन्छन् - फिल्टरहरू, फारमहरू, रिपोर्टहरू, प्रोफाइल अनुमतिहरू आदि। तपाइँ पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ जो प्रोफाइल अनुमतिहरू अनुकूलित गरेर कुन क्षेत्र हेर्न / सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ।
स्तम्भहरू अनुकूलन गर्नुहोस् र फिल्टरहरू सुरक्षित गर्नुहोस् 1 को 2
तपाइँ सजिलै स्तम्भहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
अधिक जान्नुहोस्: फिल्टरहरू
स्तम्भहरू अनुकूलन गर्नुहोस् र फिल्टरहरू सुरक्षित गर्नुहोस्2को 2
तपाईं सजिलै संग कुनै पनि क्षेत्र जस्तै बिक्री व्यक्ति, देश, अर्को अनुवर्ती मिति आदिको आधारमा रेकर्डहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुनेछ। यी फिल्टरहरू पनि बचत गर्न सक्नुहुन्छ।
हामीलाई पठाउनुहोस् केही प्रतिक्रिया!
हामीलाई केहि प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्
तपाईंको बहुमूल्य प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद